Lakulan: Gabadha sida faraska u fuusha lo’da | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Lakulan: Gabadha sida faraska u fuusha lo’da
Lakulan: Gabadha sida faraska u fuusha lo’da
Muqdisho – Kadib markii loo sheegay inaysan hanan karin faras – waayo waa qaali, 11-jirta lagu magacaabo Sarah Simpson, waxay go’aansatay inay isku daydo waxa xiga ee ugu fiican – oo ah inay kaxayso Lo’da.
Hadda, Sarah, oo 18-jir ah, waxay faraskeeda gaarka ah u heysataa lo’. Waxay ku gashaa orodada lo’da oo lagu magacaabo Lilac sida dhiggeeduba u adeegsadaan faraska.
Sarah waxay taniyo intay xusuusataba ku riyoon jirtay yeelashada faras u gaar ah, hayeeshe markii waalidkeedu u sheegeen inaysan u heli karin faras, waxay soo hindistay inay lo’daba ay ka yeelato hab-wareeg sida faraska lagu daanshoodo – laguna baratamo.
Waxay markeedii ugu horreysay bilowday kaxeynta lo’da iyada oo yar markii walaalkeed ka yar, Tim, uu u sheegay inay isku daydo. In kasta oo aysan lahayn khibradda fuullaanka iyo bedertanka, hadana Sarah waxay ku dhacday dusha Lilac, oo markaas ahayd ahayd Weyl yar oo ku jirta xeradooda.
Lo’du waaya’aragnimo kama qaadin muddaba falkan Sarah ay kula dhaqaaqay, hayeeshe hadda muddo laga joogo lix sano iyo bar, Sarah iyo Lilac waxay iskaga dhigan yihiin faras iyo fardaley.
Next: Maal-qabeen qasaaray 1.4bilyan oo doolar 24 saac gudaheeda.